ယူနိုက်တက် 1 – 1 အာဆင်နယ် ပွဲစဉ်မှ ပြောစရာ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အချက်5ချက် - SPORTS MYANMAR
ယူနိုက်တက် 1 – 1 အာဆင်နယ် ပွဲစဉ်မှ ပြောစရာ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အချက်5ချက်
ယူနိုကျတကျ 1 – 1 အာဆငျနယျ ပှဲစဉျမှ ပွောစရာ ဖွဈခဲ့ရတဲ့ အခကျြ5ခကျြ
ဒီနေ့ နံနကျ အိုးလျ ထရပျဖို့ဒျ မှာ ကစား ခဲ့ ကွတဲ့ ယူနိုကျတကျ နဲ့ အာဆငျနယျ ပှဲစဉျ ကတော့ တဈဖကျ တဈဂိုးစီ သရေ ရလဒျ နဲ့သာ ပွီးဆုံး သှားခဲ့ ရ ပါတယျ ။ အဆိုပါ ပှဲစဉျ မှာတော့ ယူနိုကျတကျ အတှကျ အဖှငျ့ ဂိုးကို ကှငျးလယျ ကစားသမား လေး မကျ တျောမီနေး က ပထမပိုငျး ပွီးဆုံး ကာနီး မှာ အဝေး ကနျခကျြ နဲ့ ရယူ ပေးနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ အာဆငျနယျ အသငျး အတှကျ ခွပေဂိုး ကိုတော့ ဝါရငျ့ တိုကျစဈမှူး အူဘာမီယနျး က ပှဲခြိနျ 58 မိနဈ မှာ ပွနျလညျ ရယူ ပေးသှား နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။ အစ ကတော့ စညျးကွပျ ဒိုငျဟာ အူဘာမီဟနျး ကို လူကြှံ နတေယျ လို့ ယူဆ ခဲ့တာ ကွောငျ့ ဂိုး မပေးခဲ့ ပမေယျ့ VAR နဲ့ စဈဆေး ကွညျ့ရာ မှာတော့ လူကြှံ နခွေငျး လုံးဝ မရှိ ခဲ့တဲ့ အတှကျ အာဆငျနယျ တို့ သှငျးဂိုး အတှကျ အပွညျ့အဝ အောငျပှဲ ခံသှား နိုငျခဲ့ ကွ ပါတယျ ။
သရေ ရလဒျ ဟာ ကစားပုံ ထူးခွား ပွီး မကောငျးခဲ့ ကွတဲ့ နှဈသငျးလုံး အတှကျ မြှတ တဲ့ ရလဒျ ဖွဈခဲ့တယျ လို့ ခံစား ခဲ့ ရတဲ့ အဆိုပါ ပှဲစဉျ မှ ပွောစရာ ဖွဈခဲ့ ရတဲ့ အခကျြ5ခကျြကို ဖျောပွ ပေးလိုကျ ပါတယျ ။
(1) ထိပျတိုကျ ရငျဆိုငျပှဲ ရဲ့ ပွိုငျဆိုငျ မှု ပွငျးထနျပုံ ပြောကျဆုံး ခဲ့ခွငျး
ယူနိုကျတကျ နဲ့ အာဆငျနယျ အသငျး ဆိုတာ ထိပျတိုကျ ရငျဆိုငျ ကစား ကွပွီ ဆိုတိုငျး ကှငျး မရှေးပဲ ပွိုငျဆိုငျ မှု ပွငျးထနျ လှတဲ့ အသငျး တှေ အဖွဈ နှဈပေါငျး 20 ကြျောလောကျ အထိ ပရီးမီးယား လိဂျ ပွိုငျပှဲ ကို မွိုငျဆိုငျ စခေဲ့ ကွ ပါတယျ ။ လကျရှိ အခြိနျ နဲ့ ယှဉျထိုး ကွညျ့ရငျ မနျစီးတီး နဲ့ လီဗာပူး တို့ အကွိတျအနယျ ပွိုငျဆိုငျ နကွေ သလို မြိုးပေါ့ ။
ရှိငျကိနျး နဲ့ ဗီအဲရား ၊ နစ်စတယျရှိုငျး နဲ့ အှနျနရီ ၊ အဲ့ဒီ ခတျေက ယူနိုကျတကျ နဲ့ အာဆငျနယျ တို့ရဲ့ ပွိုငျဆိုငျ မှုကို မွငျတှေ့ ခဲ့ဖူး တဲ့ သူတိုငျး ဒီ ပှဲစဉျ ကို ကွညျ့ပွီး အထူး စိတျပကျြ နကွေ မှာ အမှနျ ပါပဲ ။ ပွိုငျဆိုငျ မှုတှေ ၊ အရညျ အသှေး တှေ ဘယျမှာလဲ ??
ဒီနေ့ ပှဲစဉျ အတှငျး လူပေး မှာခဲ့ တာတှေ မြားစှာ မွငျတှေ့ ခဲ့ရ သလို လြော့တိလြော့ရဲ နိုငျတဲ့ စိတျပကျြဖှယျ ကစားဟနျ တှကေို လညျး မွငျတှေ့ ခဲ့ရ ပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ ဂိုးပေါကျ ကနျခကျြ တှေ ဟာလညျး တလှဲ ဖွဈနေ တာ မြားခဲ့ ပါတယျ ။
ဒီလို ခွစှေမျး မြိုးနဲ့ ဒီလို ကစားကှကျ မြိုးတှေ နဲ့ ထိပျသီး လေးသငျး စာရငျး ဝငျဖို့ ၊ အမှတျပေး ဖလား အကွောငျး တှေးဖို့ လုပျမယျ ဆိုရငျ မနျစီးတီး နဲ့ လီဗာပူး အသငျး တှကေ လှောငျရယျ နကွေ မှာ အသအေခြာ ပါပဲ ။
(2) ပရီးမီးယားလိဂျ မှာ ရုနျးကနျ နရေဆဲ ပီပီ
ဘောလုံး အား ကစား ပွိုငျပှဲ မှာ အသငျး တဈသငျး လုံးထကျ ကစားသမား တဈဦး တဈယောကျ တညျး ကိုသာ ဝဖေနျ အပွဈတငျ နမေယျ ဆိုရငျ ဒါဟာ မြှတမှု မရှိတဲ့ အရာ တဈခု လို့ ထငျကွေး ပေးခံ ရပါ လိမျ့မယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဒီနေ့ နံနကျ ပှဲစဉျ မှာတော့ အာဆငျနယျ ဆီ မွငျ့မား တဲ့ ပွောငျးရှကွေ့ေး နဲ့ ရောကျရှိ လာ ခဲ့တဲ့ ပီပီ ရဲ့ ခွစှေမျး က ပွောခငျြ စရာ ဖွဈနေ ခဲ့ ပါတယျ ။
သူဟာ ပရီးမီးယား လိဂျမှာ ကစားတာ အခြိနျ နညျးပါး နပေါ သေးတယျ ။ ဒီ အတှကျ အသငျး ရဲ့ ကစား ကှကျနဲ့ အံမဝငျ နိုငျတာ ၊ နညျး စနဈပိုငျး မှာ လိုအပျခကျြ ရှိနတော မြိုး ဆိုရငျ နားလညျ လကျခံ ပေးလို့ ရနိုငျ ပါ သေးတယျ ။
ဒါပမေယျ့ ယူနိုကျတကျ နဲ့ ပှဲမှာ သူ လုပျဆောငျ ခဲ့တာ တှကေ ထိပျတနျး ကစားသမား တဈယောကျ အတှကျ စိတျပကျြ ဖှယျရာ တှေ ပါပဲ ။ သူ့ရဲ့ ဘောလုံး ပေးပို့ မှု တှဟော အကွိမျ မြားစှာ တလှဲ ဖွဈခဲ့ ရ သလို ဂိုးပေါကျ ကနျခကျြ တှေ ဟာလညျး ဂိုးပေါကျ မတညျ့ ခဲ့ရ ပါဘူး ။
သူဟာ ယူနိုကျတကျ ခံစဈ နဲ့ ဂိုးသမား တှကေို ထူးခွား တဲ့ ပုံစံ တဈခုခု နဲ့တောငျ ဒုက်ခတှေ လုံလောကျစှာ မပေး နိုငျခဲ့ ပါဘူး ။ အာဆငျနယျ အတှကျ ကတော့ ကစားသမား ကို ချေါယူ နိုငျဖို့ ပေါငျ 72 သနျးထိ သုံးစှဲ ခဲ့ခွငျး က ထူးခွား ခွငျး မရှိ ခဲ့သေး ပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ ပီပီ ဟာ ငယျရှယျ ပါ သေးတယျ ၊ သူဟာ ပရီးမီးယား လိဂျနဲ့ အသားကသြှား ပါက အာဆငျနယျ အတှကျ ရှဆေ့ကျ အကြိုးပွု ပေးနိုငျ မယျ့ အလား အလာ ကောငျးတှေ ပိုငျဆိုငျ နိုငျပါ လိမျ့မယျ ။
(3) ဆိုးလျရှား ရဲ့ စတား ကစားသမား ဖွဈကွောငျး သကျသေ ပွ ခဲ့တဲ့ တျောမီနေး
ဆိုးလျရှား ဟာ အိုးလျ ထရပျဖို့ဒျ ကို ရောကျရှိ လာ ခဲ့တဲ့ နောကျ ယူနိုကျတကျ ရဲ့ ကစားသမား တှထေဲ အတိုးတကျ လာဆုံး သူက တျောမီနေး ပဲ ဖွဈခဲ့ ရ ပါတယျ ။ သူဟာ ဒီ နံနကျ အာဆငျနယျ နဲ့ ကစား ခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျ မှာလညျး အသငျး ရဲ့ ကှငျးလယျ မှာ အရေး ပါတဲ့ ကစားသမား ဖွဈကွောငျး သကျသေ ပွသှား နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။
သူဟာ ဒီနေ့ ပှဲစဉျ မှာတော့ ကှငျးလယျပိုငျး မှာ တာဝနျ ကခြေဲ့ သလို တိုကျစဈ ပိုငျး ကိုလညျး အမွဲလို တကျရောကျ ကူညီ ပေးနိုငျ ခဲ့ပွီး ခံစဈ ကစားသမား တှရေဲ့ ဖိအား ကိုလညျး လြော့ခြ ပေးသှား နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။ သူဟာ အသငျး ရဲ့ တဈလုံး တညျးသော ဂိုးကို အဝေး ကနျခကျြ နဲ့ ရယူ ပေးသှား နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။
ဟိုဆေး မျောရငျဟို ကိုငျတှယျ ခဲ့တဲ့ အခြိနျ က စတငျ ပွီး ယူနိုကျတကျ မှာ နရော တဈခု ရရှိ လာ ခဲ့တဲ့ တျောမီနေး ဟာ ပှဲထှကျ ကစား ခှငျ့ တှနေဲ့ ထိုကျတနျ သူ ဖွဈကွောငျး ၊ အသငျး ရဲ့ အားထား ရတဲ့ ကှငျးလယျ ကစားသမား ကောငျး တဈဦး ဖွဈလာ နိုငျကွောငျး ဆကျလကျ သကျသေ ပွနေ ဆဲ ပါပဲ ။
(4) ပရိသတျတှေ ယုံကွညျမှု မရှိတဲ့ အရာကို ဆကျတိုကျ လုပျဆောငျ ပွနတေဲ့ အာဆငျနယျ
အာဆငျနယျ အသငျးဟာ နညျးပွ အာဆငျဝငျးဂါး လကျအောကျ မှာ တိကြ သခြော တဲ့ ကစား ကှကျနဲ့ ကစား ခဲ့ ရတဲ့ အခြိနျ ကစား ကှကျကို ခံစဈ ကနေ တညျ ကစားတာ မြိုး ၊ ဘောလုံး ကို ပိုငျပိုငျ နိုငျနိုငျ ကိုငျ ကစား နိုငျတာ မြိုး လုပျဆောငျ ခဲ့ ပါတယျ ။ ဒီ အတှကျ ပရိသတျ တှလေညျး အသငျး ရဲ့ ကစား ပုံကို နှဈခွိုကျ ခဲ့ကွ ပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ နညျးပွ အမျမရီ ရဲ့ လကျအောကျ မှာတော့ အသငျး ရဲ့ ကစား ကှကျဟာ ဖရိုဖရဲ ဖွဈနေ ခဲ့ သလို ခံစဈ ကစားသမား တှဟော လညျး ယုံကွညျ သငျ့တဲ့ ခွစှေမျး မပိုငျဆိုငျ ထားတာ ကို မွငျတှေ့ ခဲ့ရ ပါတယျ ။ ဒါ့ကွောငျ့ လညျး အာဆငျနယျ ပရိသတျ တှကေ ခံစဈပိုငျး ဘောလုံး ကိုငျ ကစားတာ ကို မမွငျတှေ့ လိုခဲ့ ကွ ပါဘူး ။
ဒါပမေယျ့ ဂိုးသမား လီနို ကတော့ ဘောလုံး ရရှိ တဲ့ အခြိနျ တိုငျးမှာ ဒေးဗဈ လုဝဈ နဲ့ ဆိုကရေးတဈ တို့ကို ရှာဖှေ နခေဲ့ ပွီး ဘောလုံး အတို ကစား ရငျး ကစား ကှကျ တညျဆောကျ ဖို့ လုပျခဲ့ တာကို အကွိမျ မြားစှာ မွငျတှေ့ ခဲ့ရ ခွငျးက အာဆငျနယျ ပရိသတျ တှကေို စိတျသောက ရောကျရှိ စခေဲ့ ပါတယျ ။ ဒါကို မွနျဆနျ သှကျလကျ တဲ့ ယူနိုကျတကျ တိုကျစဈ ကစားသမား တှကေ ဒုက်ခ ပေးသှား ဖို့ ကွိုးစား ခဲ့ကွ ပါ သေးတယျ ။
ဒါပမေယျ့ နောကျပိုငျး အထာနပျ သှားတဲ့ လီနို ဟာ ခံစဈ မှူး တှကေို ဘောလုံး မပေး တော့ပဲ တိုကျရိုကျ ကနျတငျ မှုတှေ ပွုလုပျ သှားခဲ့တဲ့ အခြိနျ ပရိသတျ တှရေဲ့ လကျခုပျ သွဘာ ပေးမှု ကို ရရှိ ခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါဟာ ဒီနေ့ ပှဲစဉျ မှာ မွငျတှေ့ လိုကျ ရတဲ့ အာဆငျနယျ အသငျး ရဲ့ ပွောငျးလဲ မှု တဈရပျ ပါပဲ ။
(5) VAR ရဲ့ မှနျကနျမှု
ဒီနှဈ ဘောလုံး ရာသီ စတငျ ခဲ့စဉျ တုနျးက VAR ဟာ အသငျး အတျော မြားမြား ကို မှားယှငျး တဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြ အခြို့ နဲ့ ဒုက်ခ တှေ ပေးခဲ့ ပါတယျ ။ အဲ့ဒီ ဒဏျကို ပရီးမီးယားလိဂျ ထိပျသီး ကလပျ အခြို့ လညျး ခံစား ခဲ့ ကွရ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဒီ တဈကွိမျ မှာတော့ VAR ရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြ တဈရပျ ဟာ မှနျကနျ သှားခဲ့ ပါတယျ ။
အာဆငျနယျ တို့ ခွပေဂိုး သှငျးယူ ခဲ့ရာ မှာ စညျးကွပျ ဒိုငျက လူကြှံဘော အဖွဈ သတျမှတျ ခဲ့ ပမေယျ့ VAR ကို ပွနျလညျ စဈဆေး ကွညျ့ရှု ခဲ့တဲ့ နောကျ အူဘာမီယနျး ဟာ လူ မကြှံ ခဲ့တာ ကွောငျ့ အာဆငျနယျ တို့ ပြျောရှငျ ခဲ့ရ ပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ ယူနိုကျတကျ ဖကျက ကွညျ့လိုကျမယျ ဆိုရငျ ပွိုငျဖကျ အသငျး ရဲ့ ဧရိယာ ထဲ အာဆငျနယျ နောကျခံလူ လကျထိ ခဲ့တာ ကို VAR နဲ့ ပွနျလညျ မစဈဆေး ခဲ့ခွငျး က ဆိုးလျရှား နဲ့ ယူနိုကျတကျ ကစားသမား တှေ အတှကျ စိတျ မကနြေပျ စရာ ကိစ်စ တဈရပျ ဖွဈသှား ခဲ့ရ ပါတယျ ။
ဒီနေ့ နံနက် အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ် မှာ ကစား ခဲ့ ကြတဲ့ ယူနိုက်တက် နဲ့ အာဆင်နယ် ပွဲစဉ် ကတော့ တစ်ဖက် တစ်ဂိုးစီ သရေ ရလဒ် နဲ့သာ ပြီးဆုံး သွားခဲ့ ရ ပါတယ် ။ အဆိုပါ ပွဲစဉ် မှာတော့ ယူနိုက်တက် အတွက် အဖွင့် ဂိုးကို ကွင်းလယ် ကစားသမား လေး မက် တော်မီနေး က ပထမပိုင်း ပြီးဆုံး ကာနီး မှာ အဝေး ကန်ချက် နဲ့ ရယူ ပေးနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အာဆင်နယ် အသင်း အတွက် ခြေပဂိုး ကိုတော့ ဝါရင့် တိုက်စစ်မှူး အူဘာမီယန်း က ပွဲချိန် 58 မိနစ် မှာ ပြန်လည် ရယူ ပေးသွား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ အစ ကတော့ စည်းကြပ် ဒိုင်ဟာ အူဘာမီဟန်း ကို လူကျွံ နေတယ် လို့ ယူဆ ခဲ့တာ ကြောင့် ဂိုး မပေးခဲ့ ပေမယ့် VAR နဲ့ စစ်ဆေး ကြည့်ရာ မှာတော့ လူကျွံ နေခြင်း လုံးဝ မရှိ ခဲ့တဲ့ အတွက် အာဆင်နယ် တို့ သွင်းဂိုး အတွက် အပြည့်အဝ အောင်ပွဲ ခံသွား နိုင်ခဲ့ ကြ ပါတယ် ။
သရေ ရလဒ် ဟာ ကစားပုံ ထူးခြား ပြီး မကောင်းခဲ့ ကြတဲ့ နှစ်သင်းလုံး အတွက် မျှတ တဲ့ ရလဒ် ဖြစ်ခဲ့တယ် လို့ ခံစား ခဲ့ ရတဲ့ အဆိုပါ ပွဲစဉ် မှ ပြောစရာ ဖြစ်ခဲ့ ရတဲ့ အချက်5ချက်ကို ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပါတယ် ။
(1) ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ပွဲ ရဲ့ ပြိုင်ဆိုင် မှု ပြင်းထန်ပုံ ပျောက်ဆုံး ခဲ့ခြင်း
ယူနိုက်တက် နဲ့ အာဆင်နယ် အသင်း ဆိုတာ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင် ကစား ကြပြီ ဆိုတိုင်း ကွင်း မရွေးပဲ ပြိုင်ဆိုင် မှု ပြင်းထန် လှတဲ့ အသင်း တွေ အဖြစ် နှစ်ပေါင်း 20 ကျော်လောက် အထိ ပရီးမီးယား လိဂ် ပြိုင်ပွဲ ကို မြိုင်ဆိုင် စေခဲ့ ကြ ပါတယ် ။ လက်ရှိ အချိန် နဲ့ ယှဉ်ထိုး ကြည့်ရင် မန်စီးတီး နဲ့ လီဗာပူး တို့ အကြိတ်အနယ် ပြိုင်ဆိုင် နေကြ သလို မျိုးပေါ့ ။
ရွိင်ကိန်း နဲ့ ဗီအဲရား ၊ နစ္စတယ်ရွိုင်း နဲ့ အွန်နရီ ၊ အဲ့ဒီ ခေတ်က ယူနိုက်တက် နဲ့ အာဆင်နယ် တို့ရဲ့ ပြိုင်ဆိုင် မှုကို မြင်တွေ့ ခဲ့ဖူး တဲ့ သူတိုင်း ဒီ ပွဲစဉ် ကို ကြည့်ပြီး အထူး စိတ်ပျက် နေကြ မှာ အမှန် ပါပဲ ။ ပြိုင်ဆိုင် မှုတွေ ၊ အရည် အသွေး တွေ ဘယ်မှာလဲ ??
ဒီနေ့ ပွဲစဉ် အတွင်း လူပေး မှာခဲ့ တာတွေ များစွာ မြင်တွေ့ ခဲ့ရ သလို လျော့တိလျော့ရဲ နိုင်တဲ့ စိတ်ပျက်ဖွယ် ကစားဟန် တွေကို လည်း မြင်တွေ့ ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ဂိုးပေါက် ကန်ချက် တွေ ဟာလည်း တလွဲ ဖြစ်နေ တာ များခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီလို ခြေစွမ်း မျိုးနဲ့ ဒီလို ကစားကွက် မျိုးတွေ နဲ့ ထိပ်သီး လေးသင်း စာရင်း ဝင်ဖို့ ၊ အမှတ်ပေး ဖလား အကြောင်း တွေးဖို့ လုပ်မယ် ဆိုရင် မန်စီးတီး နဲ့ လီဗာပူး အသင်း တွေက လှောင်ရယ် နေကြ မှာ အသေအချာ ပါပဲ ။
(2) ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ရုန်းကန် နေရဆဲ ပီပီ
ဘောလုံး အား ကစား ပြိုင်ပွဲ မှာ အသင်း တစ်သင်း လုံးထက် ကစားသမား တစ်ဦး တစ်ယောက် တည်း ကိုသာ ဝေဖန် အပြစ်တင် နေမယ် ဆိုရင် ဒါဟာ မျှတမှု မရှိတဲ့ အရာ တစ်ခု လို့ ထင်ကြေး ပေးခံ ရပါ လိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ နံနက် ပွဲစဉ် မှာတော့ အာဆင်နယ် ဆီ မြင့်မား တဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး နဲ့ ရောက်ရှိ လာ ခဲ့တဲ့ ပီပီ ရဲ့ ခြေစွမ်း က ပြောချင် စရာ ဖြစ်နေ ခဲ့ ပါတယ် ။
သူဟာ ပရီးမီးယား လိဂ်မှာ ကစားတာ အချိန် နည်းပါး နေပါ သေးတယ် ။ ဒီ အတွက် အသင်း ရဲ့ ကစား ကွက်နဲ့ အံမဝင် နိုင်တာ ၊ နည်း စနစ်ပိုင်း မှာ လိုအပ်ချက် ရှိနေတာ မျိုး ဆိုရင် နားလည် လက်ခံ ပေးလို့ ရနိုင် ပါ သေးတယ် ။
ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက် နဲ့ ပွဲမှာ သူ လုပ်ဆောင် ခဲ့တာ တွေက ထိပ်တန်း ကစားသမား တစ်ယောက် အတွက် စိတ်ပျက် ဖွယ်ရာ တွေ ပါပဲ ။ သူ့ရဲ့ ဘောလုံး ပေးပို့ မှု တွေဟာ အကြိမ် များစွာ တလွဲ ဖြစ်ခဲ့ ရ သလို ဂိုးပေါက် ကန်ချက် တွေ ဟာလည်း ဂိုးပေါက် မတည့် ခဲ့ရ ပါဘူး ။
သူဟာ ယူနိုက်တက် ခံစစ် နဲ့ ဂိုးသမား တွေကို ထူးခြား တဲ့ ပုံစံ တစ်ခုခု နဲ့တောင် ဒုက္ခတွေ လုံလောက်စွာ မပေး နိုင်ခဲ့ ပါဘူး ။ အာဆင်နယ် အတွက် ကတော့ ကစားသမား ကို ခေါ်ယူ နိုင်ဖို့ ပေါင် 72 သန်းထိ သုံးစွဲ ခဲ့ခြင်း က ထူးခြား ခြင်း မရှိ ခဲ့သေး ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ပီပီ ဟာ ငယ်ရွယ် ပါ သေးတယ် ၊ သူဟာ ပရီးမီးယား လိဂ်နဲ့ အသားကျသွား ပါက အာဆင်နယ် အတွက် ရှေ့ဆက် အကျိုးပြု ပေးနိုင် မယ့် အလား အလာ ကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင် နိုင်ပါ လိမ့်မယ် ။
(3) ဆိုးလ်ရှား ရဲ့ စတား ကစားသမား ဖြစ်ကြောင်း သက်သေ ပြ ခဲ့တဲ့ တော်မီနေး
ဆိုးလ်ရှား ဟာ အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ် ကို ရောက်ရှိ လာ ခဲ့တဲ့ နောက် ယူနိုက်တက် ရဲ့ ကစားသမား တွေထဲ အတိုးတက် လာဆုံး သူက တော်မီနေး ပဲ ဖြစ်ခဲ့ ရ ပါတယ် ။ သူဟာ ဒီ နံနက် အာဆင်နယ် နဲ့ ကစား ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် မှာလည်း အသင်း ရဲ့ ကွင်းလယ် မှာ အရေး ပါတဲ့ ကစားသမား ဖြစ်ကြောင်း သက်သေ ပြသွား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
သူဟာ ဒီနေ့ ပွဲစဉ် မှာတော့ ကွင်းလယ်ပိုင်း မှာ တာဝန် ကျေခဲ့ သလို တိုက်စစ် ပိုင်း ကိုလည်း အမြဲလို တက်ရောက် ကူညီ ပေးနိုင် ခဲ့ပြီး ခံစစ် ကစားသမား တွေရဲ့ ဖိအား ကိုလည်း လျော့ချ ပေးသွား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ သူဟာ အသင်း ရဲ့ တစ်လုံး တည်းသော ဂိုးကို အဝေး ကန်ချက် နဲ့ ရယူ ပေးသွား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို ကိုင်တွယ် ခဲ့တဲ့ အချိန် က စတင် ပြီး ယူနိုက်တက် မှာ နေရာ တစ်ခု ရရှိ လာ ခဲ့တဲ့ တော်မီနေး ဟာ ပွဲထွက် ကစား ခွင့် တွေနဲ့ ထိုက်တန် သူ ဖြစ်ကြောင်း ၊ အသင်း ရဲ့ အားထား ရတဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမား ကောင်း တစ်ဦး ဖြစ်လာ နိုင်ကြောင်း ဆက်လက် သက်သေ ပြနေ ဆဲ ပါပဲ ။
(4) ပရိသတ်တွေ ယုံကြည်မှု မရှိတဲ့ အရာကို ဆက်တိုက် လုပ်ဆောင် ပြနေတဲ့ အာဆင်နယ်
အာဆင်နယ် အသင်းဟာ နည်းပြ အာဆင်ဝင်းဂါး လက်အောက် မှာ တိကျ သေချာ တဲ့ ကစား ကွက်နဲ့ ကစား ခဲ့ ရတဲ့ အချိန် ကစား ကွက်ကို ခံစစ် ကနေ တည် ကစားတာ မျိုး ၊ ဘောလုံး ကို ပိုင်ပိုင် နိုင်နိုင် ကိုင် ကစား နိုင်တာ မျိုး လုပ်ဆောင် ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီ အတွက် ပရိသတ် တွေလည်း အသင်း ရဲ့ ကစား ပုံကို နှစ်ခြိုက် ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် နည်းပြ အမ်မရီ ရဲ့ လက်အောက် မှာတော့ အသင်း ရဲ့ ကစား ကွက်ဟာ ဖရိုဖရဲ ဖြစ်နေ ခဲ့ သလို ခံစစ် ကစားသမား တွေဟာ လည်း ယုံကြည် သင့်တဲ့ ခြေစွမ်း မပိုင်ဆိုင် ထားတာ ကို မြင်တွေ့ ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် လည်း အာဆင်နယ် ပရိသတ် တွေက ခံစစ်ပိုင်း ဘောလုံး ကိုင် ကစားတာ ကို မမြင်တွေ့ လိုခဲ့ ကြ ပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် ဂိုးသမား လီနို ကတော့ ဘောလုံး ရရှိ တဲ့ အချိန် တိုင်းမှာ ဒေးဗစ် လုဝစ် နဲ့ ဆိုကရေးတစ် တို့ကို ရှာဖွေ နေခဲ့ ပြီး ဘောလုံး အတို ကစား ရင်း ကစား ကွက် တည်ဆောက် ဖို့ လုပ်ခဲ့ တာကို အကြိမ် များစွာ မြင်တွေ့ ခဲ့ရ ခြင်းက အာဆင်နယ် ပရိသတ် တွေကို စိတ်သောက ရောက်ရှိ စေခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါကို မြန်ဆန် သွက်လက် တဲ့ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ် ကစားသမား တွေက ဒုက္ခ ပေးသွား ဖို့ ကြိုးစား ခဲ့ကြ ပါ သေးတယ် ။
ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း အထာနပ် သွားတဲ့ လီနို ဟာ ခံစစ် မှူး တွေကို ဘောလုံး မပေး တော့ပဲ တိုက်ရိုက် ကန်တင် မှုတွေ ပြုလုပ် သွားခဲ့တဲ့ အချိန် ပရိသတ် တွေရဲ့ လက်ခုပ် သြဘာ ပေးမှု ကို ရရှိ ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါဟာ ဒီနေ့ ပွဲစဉ် မှာ မြင်တွေ့ လိုက် ရတဲ့ အာဆင်နယ် အသင်း ရဲ့ ပြောင်းလဲ မှု တစ်ရပ် ပါပဲ ။
(5) VAR ရဲ့ မှန်ကန်မှု
ဒီနှစ် ဘောလုံး ရာသီ စတင် ခဲ့စဉ် တုန်းက VAR ဟာ အသင်း အတော် များများ ကို မှားယွင်း တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် အချို့ နဲ့ ဒုက္ခ တွေ ပေးခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ ဒဏ်ကို ပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်သီး ကလပ် အချို့ လည်း ခံစား ခဲ့ ကြရ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီ တစ်ကြိမ် မှာတော့ VAR ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ရပ် ဟာ မှန်ကန် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် တို့ ခြေပဂိုး သွင်းယူ ခဲ့ရာ မှာ စည်းကြပ် ဒိုင်က လူကျွံဘော အဖြစ် သတ်မှတ် ခဲ့ ပေမယ့် VAR ကို ပြန်လည် စစ်ဆေး ကြည့်ရှု ခဲ့တဲ့ နောက် အူဘာမီယန်း ဟာ လူ မကျွံ ခဲ့တာ ကြောင့် အာဆင်နယ် တို့ ပျော်ရွှင် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက် ဖက်က ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင် ပြိုင်ဖက် အသင်း ရဲ့ ဧရိယာ ထဲ အာဆင်နယ် နောက်ခံလူ လက်ထိ ခဲ့တာ ကို VAR နဲ့ ပြန်လည် မစစ်ဆေး ခဲ့ခြင်း က ဆိုးလ်ရှား နဲ့ ယူနိုက်တက် ကစားသမား တွေ အတွက် စိတ် မကျေနပ် စရာ ကိစ္စ တစ်ရပ် ဖြစ်သွား ခဲ့ရ ပါတယ် ။